चन्द्र ढकालको अर्को काण्ड बाहिरियो, माधव नेपाललाई आपत — Imandarmedia.com
काठमाडौ। चन्द्र ढकाल एक नामुक व्यापारी हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको जागिर छोडेर व्यापारमा होमिएका उनी हुण्डि कारोबारीमा नेपालका मुख्य एजेण्ट हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर गर्दैगर्दा उनको भेट एक हुण्डि व्यापारीसँग भयो । त्यही सिलसिलामा जागिर भन्दा धेरै पैसा आउने भएपछि उनीले हुण्डिको धन्दामा लागेका थिए । त्यो धन्दा अहिले पनि चलिरहेको छ।
पछि कानुनी रुप दिन आफ्नो कालो धनलाई सेतो बनाउन हुण्डिलाई आईएमईका रुपमा विकास गरे । अहिले पनि बाहिर आईएमई देखिए पनि भित्र मुख्य रुपमा उनको धन्दा हुण्डि कारोबार नै हो। अष्ट्रेलिया, जापान, कतार, मलसिया लगायत युरोप र अमेरिकाका देशहरुबाट अहिले पनि हुण्डि कारोबार भइरहेको छ।
त्यसका मख्य एजेण्ट उनी हुन् भने बाहिर देखिनेगरी न्यारोडका कपडा व्यापारीले काम गर्छन् । हुण्डि कारोबार कसरी हुन्छ र उनीहरुको हुलिया के हो ? कस्ता कोटेशनमा काम हुन्छन् ? हुण्डिको चावी लगायतका विषयमा खोजमूलक रिर्पोट अर्को अंकमा प्रस्तुत गरौँला तर आज चन्दागिरी स्थापना र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग चन्द्र ढकालको सम्बन्धका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र मद्येश केन्द्रीत दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल २०६८ माघ २० गते बाहिरिए । उनी बाहिरिन भन्दा दुई दिनअघि चन्द ढकाललाई ठूलो गुन लगाइदिएका थिए । नेपालले माघ १८ गते चन्द्रगिरी डाँडोमा जंगल फडानी गरी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएका थिए।
त्यसको गुन ढकालले अहिलेसम्म तिरेका छैनन् । यसको अवसर नेकपा एमाले फुटाउँदा आएको थियो । त्यो पनि सुदूरपश्चिमका नेता प्रेम आलेले हावामा उडाइदिए ।खासमा माधवले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्नुअघि बन्द भेला र प्रशिक्षण आयोजना गर्दाको रकम ढकालले तिर्ने सहमति भएको थियो। कार्यालयको लेखा फाँटमा भेटिएको बिल अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, सेवाशुल्कसहित झण्डै १२ लाख रुपैयाँ अक्सिजन मन्त्रीको उपमा पाएमा प्रेम आलेले तिरिदिए।
घटना यसरी सुरु भएको थियो भने भन्दै नभनी माधव नेपालसहितका नेता चन्द्रागिरीमा उक्लिए । त्यसका मालिक चन्द्र ढकाल आफूले मिडियामार्फत यो विषय थाहा पाएपछि छक्क परे। चन्द्रले स्टाफहरूलाई सोधे, खोजे । कसैले माधवनजिक गएर कुरा गराउन सकेनन् । त्यसपछि तनहुँका सांसद तथा व्यापारी किसान श्रेष्ठलाई चन्द्रले फोन गरे ।
किसानकै मोबाइलबाट माधव र चन्द्रबीच कुराकानी भयो। कुरा सकिएपछि चन्द्रले भने, ‘मैले आजसम्म उहाँको गुण तिर्ने मौका पाएको थिइन । जे–जति बिल भएको छ, त्यो मेरो पर्सनल अकाउण्टमा हाल्नु भनेर स्टाफहरूलाई भनिसकेको छु । म परेको र सकेको सहयोग गर्दै रहन्छु । अहिलेलाई त्यो बिल त्यहीँ रहोस्, मेरै नाममा ’ किसानले ‘धन्यवाद्’ भने, फोट काटे।
पर्सिपल्ट बैठक सिध्याएर सीधै निर्वाचन आयोग जान भनी सहभागी सबै नेता टुरिस्ट बसमा चढ्ने तरखर गरिरहेका थिए । डोटीका सांसद प्रेम आलेले माधव नजिक पुगेर एउटा चिर्कटो निकाल्दै भने, ‘मैले बिल तिरेँ हजुर‘!’ माधवले अचम्म मान्दै सोध्नुभयो, ‘किन तिर्नुभएको ? मैले तिर्नु भनेको थिएँ ?’ आलेले भने, ‘काउन्टरमा सोधेको, यति पैसा भयो भन्दै थियो । अनि, मैले गरिदिएँ हजुर‘!’ गाली गरौँ, रिसाऔँ, दल दर्तामा जानु छ, उनैको समेत संख्या मिलाएर २० प्रतिशत सांसद पु¥याउनु छ । केही नभनौँ, कसरी सहनु ? माधव अप्ठेरोमा पर्नुभयो । खासमा उहाँ आलेसँग रिसाइसक्नुभएको थियो । रिस पोख्नमात्रै समस्या।
एकैछिनमा फेरि चन्द्र ढकालले रिसाएर किसानलाई फोन गरे । ‘तपाईंहरूले यस्तो गर्ने ? मैले भन्दाभन्दै मेरो कुरालाई इग्नोर गर्ने ? मजा भएन यार यो त ! मैले एकदम ह्युमिलिएट फिल गरेँ !’ तर, यतिबेलासम्म किसानलाई पनि थाहा रहेनछ– प्रेमले हत्तपत्त पैसा तिरेको कुरा । उनले सोधे, ‘के भयो ?’ चन्द्रले भने, ‘प्रेम आलेजीले हत्तपत्त गएर पैसा तिर्नुभएछ । स्टाफहरूले पनि मलाई सोधेनन् । साह्रै नमज्जा भयो । बूढासँग त्यत्रो कुरा गरेँ।
अन्तिममा पैसा तिरेर मलाई नमज्जा बनाइदिने ?’ किसान पनि नाजवाफ बने । उनले यही कुरा माधवलाई सुनाए । माधवले सानो स्वरमा प्रेमबारे भन्नुभयो, ‘कस्तो मान्छे होला त्यो ?’ उहाँले ‘चन्द्रलाई म मिलाएर भन्छु’ भन्नुभयो । किसानले भने, ‘उनी त फायर भइसके हजुर, यस्तो–यस्तो गर्ने भनेर मलाई गुनासो गर्दै थिए।
खासमा ‘फायर’ त चन्द्रभन्दा माधव नै बढी हुनुभएको थियो, देखाउनमात्रै नमिलेको। पछि चन्द्र ढकालले एकाउन्टका स्टाफलाई फोन गरेर झपारे । मैले पैसा नलिनु भनेको होइन् ? किन उहाँहरुको पैसा लिएको ?’ खासमा एकाण्डका म्यानेजरलाई पनि यो विषय थाहा रहेनछ। अर्कै स्टाफले पैसा बुझेका रहेछन्।
यसैगरि, सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गीएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्ग्याएको हो। जस अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री परेको छ। एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मेटमणी चौधरीले आफूहरुले पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले रक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाएको छ। समाजवादीबाट एकजना राज्यमन्त्रीसमेत हुनेछन्। एकीकृत समाजवादीका एक शीर्ष नेताले पार्टीको तर्फबाट विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी र प्रेम आलेमगर मन्त्री बन्ने जानकारी दिए।
भवानी खापुङ पनि मन्त्री बन्ने चर्चा भए पनि पार्टीको भागमा पाँचवटा मात्रै मन्त्रालय परेकाले उनी मन्त्री नबन्ने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीले राज्यमन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लगाइसकेको छैन। शीर्ष नेताहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरू अहिले आन्तरिक छलफलसमेत गरिरहेका छन्।